Iofisi yabantu abafayo-iGeofumadas
Ikhaya/Office for ebulalayo
Namathisela ispredishithi kwi-AutoCAD, ehlaziywa ngokuzenzekelayo
Nangona sinokufikelela kwinqanaba, ebonisa ukuba i-Ofisi eNgenisa ngaphandle sisixhobo onokuthi ngaso ube ne-Excel spreadsheet okanye ifayile yeLizwi eqhagamshelwe, kwaye ihlaziywe ngokuguquguqukayo ngokwe...
Imeko: Ndinedatha eqokelelwe kunye ne-GPS Promark 100, kwaye ngokusebenzisa i-post-processing ye-GNSS isicelo esinayo la maqela, ivumela ukuba ndithumele ulwazi kwi-Excel. Iikholamu eziphawulwe ngomthubi lulungelelwaniso lwasempuma, emantla kunye ngokwahlukeneyo...
Le template ye-Excel yenziwe ekuqaleni ukuguqula ulungelelwaniso lwejografi kwi-UTM, ukusuka kwifomathi yedesimali ukuya kwiidigri, imizuzu kunye nemizuzwana. Ngokuchaseneyo netemplate ebesiyenze ngaphambili, njengoko kubonwa kumzekelo: Ukongeza:...
Kweli nqaku siza kubona indlela yokuqwalasela iPOP yeGmail. Kwabo bahamba kakhulu okanye bafuna ukufikelela kwi-imeyile kwiikhomputha ezahlukeneyo, ukusebenzisa umxhasi weMicrosoft Outlook akulula ngokwenene; nangona ngeenjongo zeziko iphantse ingenakuthintelwa,…
Oku kuhlala kuyingxaki xa uhlela umbhalo we-html kwi-Microsoft Word okanye uMbhali oBomi. Ingxaki yikhowudi efana nemibuzo engaqhelekanga malunga neetekhnoloji zeCAD Iya kusinika ingxaki, kuba izicatshulwa esizisebenzisayo kufuneka zibe…
Uyenza njani isalathiso esizenzekelayo ngeMicrosoft Word
I-Microsoft Word idla ngokuba yenye yezo nkqubo sifunde ukuzisebenzisa ngaphandle kokuthatha ikhosi. Ngokucofa kunye nokungena siye saqonda ukuba isetyenziselwa ukwenza amaxwebhu, ukuba ineetafile, ukuba iitafile zidibanisa njenge-Excel...
Ngokuqhelekileyo kwenzeka kuthi ukuba sikhohlwe apho ifayile igcinwe khona. Ngamanye amaxesha sasiyihambisa, siyivule kwifolda yokukhuphela yesikhangeli okanye ngokulula injini yokukhangela yeWindows yintlekele. Ke ukuba loo fayile...
Amaxesha amaninzi xa kukotshwa idatha kwi-Intanethi ukuya kwi-Excel, amanani anekoma njengamawaka abahluli. Nokuba siyitshintsha kangakanani na ifomathi yeseli kwinani, isengumbhalo kuba i-Excel ayinakuqonda amawaka isahluli...
Ukuthelekisa njani amaxwebhu amabini eLizwi
Ngokuqhelekileyo kwenzeka kuthi ukuba sisebenze kuxwebhu, ngoko umntu uyayitshintsha ngaphandle kokujonga utshintsho kwaye ngokukhawuleza kufuneka sithelekise zombini. Ngaphandle kwento yokuba andifane ndibhale malunga neenkqubo zabantu abafayo,…
Kwimeko yeekhompyuter ze-Acer Aspire, indibaniselwano yokuthumela imbonakalo yesikrini kwiprojekti yokubeka iliso yangaphandle ikudibaniso lwe-Fn + F5. Kuyenzeka ukuba bangaphenduli, kwaye xa unabantu abangama-200 ...
kunjalo Tshintsha incwadi neLizwi Microsoft kunye ngaphezulu
I-Word 2007 kunye neribhoni yayo, njenge-AutoCAD isishiye ezinye izinto ezingalawulekiyo xa sikhawuleza. Ingxaki bendijonge ukuguqula okubhaliweyo ukusuka konobumba abancinci ukuya konobumba abakhulu, ebifudula ilunqakrazo lwemenyu. …
Bebendibuza oku kangangexesha elithile, kwaye ekubeni umhlobo ubonakala ngathi ungxamile kwaye namhlanje lusuku lokubhiyozela izinto ezininzi, apha ndikushiyela isixhobo esikuvumela ukuba uguqule ulungelelwaniso lwejografi, idigri ukuya kwiidesimali. Ngokuba...
MapinXL, iimephu ezivela kwi-Excel
I-MapinXL sisicelo esakhiwe yi-ARTICQUE, ejoliswe kubantu baseofisini, abangezongcali ze-GIS kodwa bafuna ukuchukumisa iimephu ezinemibala. Sichitha ubomi bethu sizama ukudibanisa iimephu zethu kwi-Excel, sisazi ukuba abanye…
Kukho izixhobo ezahlukeneyo kwi-Intanethi, ezikuvumela ukuba ufumane igama eliyimfihlo eliyimfihlo, okanye njengoko siza kubiza namhlanje: igama eliyimfihlo lefayile, andizimisele ngale post ukukhuthaza ububi; kungcono uchaze umngcipheko okhoyo ngokukholelwa ukuba...